Ọchịchọ njem abịaghachila mana ọ ka dị n'okpuru ọkwa pre-COVID
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » News » Ọchịchọ njem abịaghachila mana ọ ka dị n'okpuru ọkwa pre-COVID
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Mweghachi nke njem mba ụwa chọrọ gọọmentị iweghachi nnwere onwe ime njem - opekata mpe, ndị njem ọgwụ mgbochi ekwesịghị iche mgbochi.
Ọchịchọ njem ụgbọ elu mba ofesi na nke ụlọ gosipụtara oke ọkụ na July 2021.
Mmachibido njem njem nke gọọmentị machibidoro na-aga n'ihu na-egbu oge mgbake n'ahịa mba ụwa.
Mkpokọta ọnụ ụlọ chọrọ belatara 15.6% karịa ọkwa nsogbu.
The Airtù Na-ahụ Maka Transportgbọ njem International (IATA) mara ọkwa na ma njem ụgbọ elu mba ofesi na nke ụlọ gosipụtara oke ọkụ na July 2021 ma e jiri ya tụnyere June, mana arịrịọ ka dị n'okpuru ọkwa ọrịa pre-COVID-19. Mkpuchi mmachi njem gọọmentị machibidoro na-aga n'ihu na-egbu oge mgbake n'ahịa mba ụwa.
Mkpokọta ihe achọrọ maka njem ụgbọ elu na July 2021 (tụrụ na kilomita ndị njem ma ọ bụ RPKs) gbadara 53.1% ma e jiri ya tụnyere Julaị 2019. Nke a bụ mmụba dị ukwuu site na June mgbe ọchịchọ dị 60% n'okpuru ọkwa June 2019.
Ihe ndị njem mba ofesi chọrọ na July bụ 73.6% n'okpuru July 2019, na -eme ka mbelata 80.9% edere na June 2021 karịa afọ abụọ gara aga. Mpaghara niile gosipụtara nkwalite na ndị ụgbọ elu North America biputere mbelata kacha nta na RPK mba ofesi (data okporo ụzọ July sitere na Africa adịghị).
Ngụkọta ọnụ ụlọ chọrọ belatara 15.6% na ọkwa ọkwa ọgba aghara (July 2019), ma e jiri ya tụnyere mbelata 22.1% edere na June karịa June 2019. Russia tinyere nsonaazụ kacha mma maka ọnwa ọzọ, yana RPK rịrị elu 28.9% vs. Julaị 2019.
Nsonaazụ Julaị na -egosipụta oke mmasị ndị mmadụ nwere ime njem n'oge mgbago ugwu ugwu ugwu. Trafficgbọ njem alaghachila na 85% nke ọkwa nsogbu, mana arịrịọ mba ụwa agbakeela naanị ihe karịrị otu ụzọ n'ụzọ anọ nke mpịakọta 2019. Nsogbu a bụ usoro njikwa oke. Ọ bụghị data na -ebuli mkpebi gọọmentị, ọkachasị na arụmọrụ ọgwụ mgbochi. Ndị mmadụ na -eme njem ebe ha nwere ike, nke ahụ bụ n'ụzọ bụ isi n'ahịa ụlọ. Mweghachi nke njem mba ụwa chọrọ gọọmentị iji weghachi nnwere onwe ime njem. Ma ọ dịkarịa ala, ndị njem nwere ọgwụ mgbochi ekwesịghị iche mgbochi. Nke ahụ ga -enyere aka ijikọ ụwa ọnụ na ịtụte ngalaba njem na njem, " Willie Walsh, Onye isi Director IATA.